Maalii magaalaa Bamakootti hidhattoonni namoota 170 iggituun gabaafame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Maalii magaalaa Bamakootti hidhattoonni namoota 170 iggituun gabaafame
Ganama har’aa, barii barraaqaa, hidhattoonni kudhan hoteela Radisson Blu Hotel magaalaa Bamakootti, Maalii, argamu humnaan seenuudhaan namoota hoteela keessa jiran 170 iggituun isaanii gabaafameera. Namoonni iggitaman: keessummoota 140 fi hojjattoota hoteelaa 30.
Hoteela Radisson Blu’tti baay’inaan kan tajaajilaman lammiilee biyya alaa kannin Maalii keessatti hojjatanii fi biyyattii daawwatan ta’uunis hubatameera. Lammiin biyya Chaayinaa tokko namoota hoteelicha keessatti iggitam keessaa tokko ta’uu isaa bilbilaan Xinhua’tti himeera.
Namoota iggitaman gadilakkisiisuuf humni nageenya Maalii hoteelicha seenuun beekameera. Hanga ammaati namoota 80 gadi lakkisiisuun isaanii TV’n Maalii gabaaseera. Paayileetonni xayyaara Daandii Faransayii fi xayyaara Daandii Turkii nammoota iggitii jalaa lubbuun bayan keessa akka jiranis beekameera. Namoonni 27, hidhattoota 2 dabalatee, du’uun hubatameera. Laakkofsi namoota lubbuu dhabanii ni dabala sodaa jedhutu jira.
Hidhattoonni waardiyoota hoteelaa hunda ajjessuudhaan kan hoteelicha too’annoo isaanii jala oolchan.
Baatii Hagayyaa keessas, achuma Maalitti, hidhattoonni hoteela magaalaa Sevaareetti argamu tokko sa’aa 24’f iggitanii du’a namoota 13’f sababa ta’aniiru.
Iggitii har’a hoteelicha irratti taasifameef qaamni hanga ammaatti itti gafatamummaa fudhate hin jiru.
iggitii hooteela bamakoo
Previous articleDawaa HIV guutummatti baalleessuu danda’u argachutti dhihaanne jedhu saayinsistoonni
Next articleMormiin barattootaa ammas akkuma itti fufetti jedhama